Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ကချင့်အမျိုးသားပညာရေးအတွက် KIO နှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ကချင်ပညာရှင်များ လိုင်ဇာတွင်ဆွေးနွေးနေ
ကချင့်အမျိုးသားပညာရေးအတွက် KIO နှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ကချင်ပညာရှင်များ လိုင်ဇာတွင်ဆွေးနွေးနေ
at 10/23/2013 12:39:00 PM
၂၃.၁၀.၂၀၁၃ ရက်နေ့ KIO, ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ တွင် KIO, ဗဟိုပညာရေး ဌာနမှ ကြီးမှုးကာ ကချင့် အမျိုးသား ပညာရေးအတွက် ကချင်ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကြီးတခု အား ပြုလုပ်နေ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ၄င်း အစည်းအဝေးပွဲ ကြီးမှာ (၂၂ မှ ၂၄.၁၀ ၂၀၁၃) ရက်နေ့ အထိ (၃) ရက်ကြာ ကချင့် ပညာရေးအတွက် ဆွေးနွေး ကြမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကချင့် အမျိုးသား ပညာရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အား ကချင့် အမျိုးသားပညာရေး ဥက္ကဌ KIA, ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားရာတွင် ကချင်လူမျိုး နှင့် ကချင်စာပေ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ စေရန်၊ မိမိတို့ ၏ ကချင် စာပေဖြင့် ဘွဲ့များ ချီးမြင့် ပေးအပ်နိုင်သည့် အဆင့် ထိ ကချင့် ပညာရေးအားတိုးချဲ့ မြင့်တင်သွားရန်၊နိုင်ငံတကာသို့ ဆက်လက်၍ အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ် နှင့် တရုတ် ဘာသာရပ်တို့ကိုလည်းထည့်တွင်း သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းပြောကြား သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများမှာ မြန်မာ ပြည်တွင်းရှိ ကချင် ပညာရှင်များ၊ဆရာ/ဆရာမ များ၊ အသင်းတော်အသီးသီးမှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ နှင့် ပြညပနိုင်ငံ သို့ ရောက်ရှိနေကြသော ကချင် ပညာရှင်များ အပါအ၀င် KIO, ပညာရေးဌာနမှ ဆရာကြီးများ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေေ ကြာင်းသိရှိရပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဓိကဆွေးနွေးကြမည့် အကြောင်းအရာများမှာ (1). ECD policy, (2). Basic education policy, (3). Core Curriculum Standards for subjects, (4). Higher Education, (5). Vocational Education, (6). Professional Development, (7). Assessment and evaluation, (8). Special education, (9). Ethnic Languages and culture, (10). Administration (Academic board), (11). Accreditation စသည့် အချက် (၁၁)ချက် အား (22.10.2013 )မှ (24.10.2013)ရက်နေ့အထိ (၃ ) ရက် ကြာ ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
— with Munglai Hkyet and 20 others.
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး ဦးဆောင်သည့် နေပြည်ေ...
Nam Lim Pa is still likeahostage: not allowed to...
Gara Hku Law ? ( Daw - III )
အောက်တိုဘာ (၈-၁၀) ဆွေးနွေးပွဲထုတ်ပြန်ချက်မှ ပူတွဲထ...
လိုင်ဇာရောက်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များအား KIO, ...
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အား လိုင်ဇာ ဒေသခံမျာ...
I amaPolitician notahuman rights worker(DASSK)...
မန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ Prof. Steinberg ကလူမျိုးဖြစ...
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်က အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်နေ့မှာ...
MYEN ASUYA HPE DU MANAT TAWN LU NA MUNGMASA HPYEN ...
ခါးတောင်းကျိုက် တလွဲ ဟိုတလွဲ ဖြစ်နေပြီ။
URGENT PRESS RELEASE- BURMESE ARMY ATTACK AND LOOT...
Gara hku law, Gara de Law? (Daw II )
Rest in Peace Ms Hpau Lu Kaw of Mung Ding Pa villa...
British government to discuss use of rape by Burme...
ကိုယ့် ကရင် အမျိုးသားတွေကို ဘယ်သူပဲအနိုင်ကျင့်ကျင့...
ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုအား အစိုးရတပ်ဖွဲ့ပစ်...
Kachin Politics and Mediation Research Network ( M...
Inside Story : Myanmar: Steps towards peace?
USA mungdan kaw na KIA agency hpe n gun jaw la ga
သူရိယအလင်းတန်းဂျာနယ်တိုက်မှ ကွန် ပြူတာ14 လုံးလုယက်...
KIO/KIA ကို အပြုတ်တိုက်ချင်တဲ့ Bullet လှဆွေ
KAJI TIM KAJI AI HKU ( DR. HKALUM )
KIO,မှ လိုင်ဇာမြို့၌ ယနေ့ ပြုလုပ်သောလူထုရှင်းလင်းပ...
ONE BIRD WENT DOWN (RFA,VOA)(video)
(ဗေလုဝ) love irrawaddy river ( video)
''Ngai gaw sinat hpai na, nang gaw hpun tawng hpai...
GENERAL SUMLUT GUNMAW (NO.1-8 )video
TSUN AI GAW SIMSA LAM, GALAW AI GAW HTEN BYA LAM
Burmese Army Attacks KIA Post near Man Hkawn
Maigan wa hpe hkum kam yaw'''Tinang myu hpe tinang...
Myu Shayi Hpung A Gawng Malai, USA WASHINGTON DC ...
HUGAWNG DUNG A MAHKAWN GAW MALAYSIA REFUGEE SONG B...
YESU A GAMADAT NNA KIA A MAGAM BUNGLI HTA AP NAWNG...
MUNGKAN HTA NINGTAWN DIK AI HPYEN JAU BU MYU 12 A ...
"Turn in your arms. The government will take care ...
Death of Kachin leader and father ofaPIME missio...
Korea Mungdan kaw galaw ai 12 Lang na Asian Baptis...
CHYURUM WUNPAWNG SHANI A LABAU SHANG GINRA NI HPE ...
Kachin Politics and Mediation Research Networka...
Kachin United song -
Kachin Land မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲ၇လဒ်အား ကုလသမဂ...
မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (စ.ရ.ဖ) က, ကချင်ကျောင်းသားမျာ...
၂၀၁၁ ဇွန်မှာ ကချင်ပြည်တွင်းစစ်ပြန်စပြီးနောက်ပိုင်း...
အစိုးရနှင့် KIO တို့ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်အပေါ် တိုင်းရင်း...
Gara hku law? Gara de law? Daw- (1).
အာဆီယံတူကြီးနဲ့ထုခံရတော့မယ်
Goverment - KIO press conference in MyitKyina -10/...
(53) ANNIVERSARY OF K.I.O DAY INVITATION
မြန်မာအစိုးရနဲ့ လက်နက်ရောင်းဝယ်တဲ့ နိုင်ငံ၊အဖွဲ့အစ...
UNFC အစည်းအဝေးစတင် ပြည်လုံးကျွတ်အပစ် ရပ်ရေးကိစ္စပါ ...
New Hundred Dollar Bill for United States-ဒေါ်လာ တရ...
Negotiation under pressure..
KIA,KIO ကို ကချင် ပြည်သူ လူထု များသောင်းသောင်းဖြ...
Hung Hking Makam Ningli ( Sumla hkrung )
Burma army kills Kachin civilians in Putao distric...
HKRISTAN NI HTE GASAT GALA LAM
Myanmar military dictators funny dance
စူပါ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်သည့် Marip Awn Seng အောန်ဆိ...
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း နှင့် အပြိုင် တရုတ်ဖောက်လု...
Kachin Response to Elders’ Myanmar Visit
New Generations of Kachin Soldiers
အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ အမှုထမ်းနေတဲ့ ကချင်အမျိုးသား ဆင်ဝ...
Villagers Confined like Hostages in Nhka Ga
REVOLUTION & FREEDOM.
မမျှော်လင့်ပါနဲ့တော့ CPI ရယ်
VERY CRUEL ( Dams and the Ignored Ethnic Conflict...